Ihe ị ga-ahụ na obodo Toledo | Akụkọ Njem
Ọtụtụ n'ime Ndị ọbịa na-abịa n'isi obodo ahụ kpebiri ịhụ obodo ndị ọzọ dị nso dịka Toledo, ebe ọ bụ na ọ dị nso na Madrid. Obodo a, nke dị na ugwu na obodo Castilla la Mancha, na-enye ọtụtụ akụkọ ntolite na ihe ncheta mara mma na gburugburu ebe dị jụụ nke ndị ọbịa niile na-amasị.
En Toledo enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ, ya mere ụbọchị ole na ole ga-atụ aro ka ị jiri nwayọ hụ ihe ọ bụla masịrị ya. N’okporo ámá ya, ị nwere ike ịchọta ihe ncheta ndị Arab, ndị Juu na nke Ndị Kraịst, nke na-agwa anyị gbasara oge gara aga jikọtara obodo a.
1 Katidral Toledo
2 Alcazar nke Toledo
3 Echiche nke ndagwurugwu
4 Agolọ Nzukọ nke Santa María la Blanca
5 Puerta de la Bisagra na mgbidi
6 Ebe obibi ndị mọnk nke San Juan de los Reyes
7 Alakụba nke Cristo de la Luz
8 Ogige Zocodover
Katidral nke Santa María nke a makwaara dị ka Catedral Primada bụ ụlọ okpukpe kachasị mkpa na obodo a. Jiri otu gụọ Gdị Gothic mara mma na ihe owuwu malitere na XNUMXth narị afọ. Enwere ike ịhụ ọnụ ụzọ atọ n'okporo ụzọ mbụ. Ọnụ ofzọ Mgbaghara, Ọnụ ofzọ Ikpe Ikpeazụ na Ọnụ ofzọ nke Hel. N'ebe ugwu bụ Puerta del Reloj, nke bụ nke kasị ochie. Ọdụm ọdụm bụ ndị kasị ibu na oge a. Lọ elu ahụ na-apụtakwa ma ọ bụ naanị ya agbanyeghị na e nwere atụmatụ abụọ. Ọ nwere ụdị Gothic na mmetụta Mudejar. N'ime ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ụlọ ụka mara mma ma anyị ga-ahụkwa ili nke Enrique II nke Castile, Eleanor nke Aragon ma ọ bụ Juan I nke Castile.
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa a ga-ahụ na Toledo. A ebe e wusiri ike n’elu oké nkume dị n’elu elu obodo ahụ. N'ime Alcazar ị nwere ike ịhụ nnukwu ọbá akwụkwọ nke Castilla la Mancha na Museum Museum. Na mgbakwunye, n’azụ Alcázar, e nwere ụfọdụ ubi ndị mara mma ị ga-esi na ya na-agagharị. Iji banye n'ụlọ ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ zụta tiketi.
Echiche nke ndagwurugwu
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe otu nnukwu ihe ngosi nke obodo ToledoIkwesighi ịhapụ ileta Mirador del Valle. Ọ bụ ebe a maara nke ọma, ebe ọ bụ na echiche obodo ahụ dị egwu. Dị ka obodo ahụ dịkwa n’elu ugwu, anyị na-ahụ ọmarịcha foto iji were foto kacha mma.
Agolọ Nzukọ nke Santa María la Blanca
Obodo Toledo pụtara ịbụ ebe ndị otu Kristi, ndị Arab na ndị Juu bikọtara ọnụ, nke ọ bụla nwere nkwenye ha, omenaala ha na okpukperechi ha. Ọ bụ ya mere taa anyị nwere ike ịhụ ụlọ dị ka nke a, ụlọ nzukọ nke dị na mpaghara ndị Juu. Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX na mgbe anyị hụrụ ya anyị ga-amata ihe kpatara aha ahụ bụ 'La Blanca'. Ọ na-anọchi anya maka nnukwu mma ya na ụda ọcha ndị ahụ na-eme ka ọ maa mma ozugbo ị hụrụ ya.
Puerta de la Bisagra na mgbidi
Toledo bụ a obodo ewusiri ike ma nwee mgbidi maka nchebe agbakwunyere. N'oge a, a na-echekwa ọtụtụ ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, nke a kasị mara amara bụ Puerta de la Bisagra, nke bụ ụlọ elu nke e wuru dị ka akara mmeri iji banye n'obodo ahụ na nke anyị nwere ike ịhụ uwe nke ogwe aka nke Carlos V. N'ime obodo ị nwekwara ike ịhụ akụkụ nke mgbidi na ọnụ ụzọ ámá dị ka nke Alcántara ma ọ bụ nke Alfonso nke Isii.
Nke a bụ a Ebe obibi ndị mọnk Franciscan nke narị afọ nke XNUMX. N'ime ya ị ga - ahụ ngwakọta nke ụdị Gothic na Mudejar nke ka dị na mpaghara a. O doro anya na cloister bụ otu n'ime ebe ndị mara mma, nke mejupụtara ogige ndị dị na veranda na ogige mara mma mara mma iji na-agagharị ma nwee ihu igwe dị mma. N'akụkụ ụfọdụ nke ebe obibi ndị mọnk, ị ga-ahụ ụlọ elu mara mma nke nwere ụdị ejiji Mudejar.
Alakụba nke Cristo de la Luz
Nke a ụlọ alakụba bụ naanị onye fọdụrụ na-eguzo nakwa na ọ bụ tupu Christian reconquest. Ọ bụghị nnukwu ụlọ alakụba mana ọ bara uru ịhụ. N'ime anyị nwere ike ịhụ arches na vaults na-ahụkarị nke alakụba. N’ime afọ nke ọgbaghara ahụ, agbakwunyela ụfọdụ akụkụ, dị ka ebe apse.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọ na-atọ ụtọ ịgagharị n'obodo na ị ga-efu n'okporo ámá ha, ị ga-agarịrị site na Plaza Zocodover, nke ọ dị ka isi square nke Toledo. Ọ bụ ebe etiti obodo ọtụtụ okporo ụzọ ya na-agbakọta. N'ebe a dị ndụ taa anyị nwere ike ịhụ ụlọ mmanya na ụfọdụ ụlọ ahịa. E nwere ụfọdụ ịmata gburugburu ya na ọ bụ na n'okpuru ya elu nwere ụfọdụ ochie lie ọha urinals. Anyi aghaghi ima na ebe a bu ebe a na-eme ihe ndi di ka okwukwe ma obu ogu ehi na na otutu narutu gara aga, ekpughere ozu ndi n’enweghi ezinulo iji weputa ego maka olili ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Toledo